बलिउडमा धेरै पटक बलात्कारको शिकार भइन् यी अभिनेत्री
एजेन्सी । बलिउड विश्वमै नम्बर एक चलचित्र उद्योग हो । जहाँ हरेक विद्यामा चलचित्र निर्माण गरिन्छ । १९६०–७० को दशकमा समाज र सामाजिक उत्पीडन तथा यौन हिंसाका विषयमा निकै चलचित्रको निर्माण भएको थियो ।
फिल्ममा आउनुभन्दा पहिले इन्जिनियर रहेका बलिउडका स्टारहरु
एजेन्सी । फिल्म जगतमा आउनु भन्दा पहिले कलाकारको आफ्नै जीवन हुन्छ । उनिहरु आफ्नै क्षेत्रमा रहेर काम गरेका हुन्छन् । बलिउडको पर्दामा देखिनु हरेकको सपना हुन्छ । यहाँ यी कलाकार रहेका छन् जो बलिउडमा स्थापित हुनुभन्दा अघि इन्जिनियर रहेका थिए ।
यसकारण बलिउडलाई हरेक हप्ता ५० करोडको घाटा
एजेन्सी । विश्वभरमा त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरसको कारणले थुप्रै क्षेत्रमा प्रभावित बनाएको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यसको असर बलिउड क्षेत्रमा पनि परेको छ ।
श्रीमान् सधै चर्चामा, श्रीमती सधै गुमनाम
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेताहरु छन् जसको श्रीमती पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । तर, केही यस्ता अभिनेताहरु छन् जो निकै चर्चामा छन् भने उनीहरुका श्रीमती भने गुमनाम जस्तै छन् । उनीहरु बलिउडदेखि पर नै रहेका छन् ।
बलिउड कलाकारहरु जो शाही परिवारबाट छन्
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेता तथा अभिनेतीहरु रहेका छन् जो शाही परिवारबाट रहेका छन् । बलिउडको क्रेज अध्याधिक भएकै कारण पनि उनीहरु कलाकारिता क्षेत्रमा देखा परे ।
अर्जुन कपुरलाई बलिउडमा रुनु न हाँस्नु !
एजेन्सी । बलिउडका स्टार अभिनेता हुन् अर्जुन कपुर । तर, बिस्तारै उनको स्टारडम धरापमा पर्न थालेको छ । मलैका अरोरासँगको सम्बन्धपछि उनी बलिउड चर्चामा कम लब अफयेर चर्चामा बढी आउन थालेका छन् । एक कार्यक्रममा उनले मलैकाबारे मुख खोलेका थिए ।
पढाई इन्जिनियरिङ, लक्ष्य बलिउड !
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेताहरु पनि रहेका छन् जसले इन्जिनियरिङको पढाइ सकेपछि फिल्म लाइनमा आफ्नो भविष्य खोजे । केही अभिनेताहरु पारिवारिक दबाबमा आएर इन्जिनियरिङ समेत गरेको बताउँछन् ।
सत्य घटनामा निर्माण भएका १० बलिउड फिल्महरु
एजेन्सी । बलिउड फिल्मले विश्वमा छुट्टै पहिचान बनाएको छ । विश्वका ठूला फिल्म उद्योगहरुमध्ये बलिउड पनि एक हो । यस बलिउड फिल्ममा पनि यस्ता कैयौं फिल्महरु रहेका छन्, जुन सत्य घटनामा आधारित भएर निर्माण भएका छन् ।